मैले निकै राम्रो माहौलमा क्रिकेट खेल्ने मौका पाएः सोमपाल कामी - cricketingnepal.com.np :: :: all about Nepali Cricket, Live Streaming, News, Views, Articles, Live scores, Statistics, Results, Fixtures, Player Profiles
मैले निकै राम्रो माहौलमा क्रिकेट खेल्ने मौका पाएः सोमपाल कामी
क्रीकेटिङ्ग नेपाल २०७६-०४-२७
सोमपाल कामीले आइतबार बिश्वब्यापी फ्राञ्चाइज क्रिकेट लिगमा आफ्नो डेब्युमै उपाधि जित्दै इतिहास रचे । सन्दिप लामिछानेपछि फ्राञ्चाइज लिग खेल्ने दोश्रो क्रिकेटर बनेका सोमपालले विनिपेगबाट खेल्दै ग्लोबल ट्वान्टी ट्वान्टीको उपाधि चुम्न सफल भए । सन्दिपको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि उनि सम्मिलित मेलबोर्न स्टार्सको टिम पछिल्लो सिजनको अष्ट्रेलियन बिग ब्यास लिगको फाइनल पुग्नु हो ।
यद्दपी सोमपालले भने प्रतियोगितामा एक खेल मात्र खेल्ने पाए । एड्मन्टन रोयल्सबिरुद्धको खेलमा स्थान बनाएका सोमपालले दुई ओभरमा ३३ रन खर्चेका थिए । तर उनको त्यो निराशाा आइतबार उपाधि जितले भने भुलाइदिएको छ । हाल क्यानडामै रहेका सोमपालसँग क्रिकेटिङ्गनेपालले उपाधि जितेपछि लिएको छोटो अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
समग्रमा पहिलो फ्राञ्चाइज लिगको अनुभव कस्तो रह्यो ?
निकै राम्रो । म एउटा नौलो प्रतियोगिता मार्फत बिश्वमा कहलिएका क्रिकेटरहरुको बीचमा खेलिरहेको थिए । एउटै डग आउटमा बस्ने मौका पाएको थिए । यो मेरो खेल जीवनको उत्कृष्ट क्षणमध्येको एक थियो । तर म यसलाई शुरुवातको रुपमा मात्र लिन चाहन्छु ।
नाम कहलिएका खेलाडीहरुको बीचमा क्रिकेट खेल्न पाँउदाको माहौल कस्तो हुँदोरहेछ ?
त्यो माहौल राम्रो लाग्यो मलाई । सबै खेलाडीहरु निकै नै सकारात्मक रहेकाले बातावरण पनि निकै सकारात्मक लाग्ने रहेछ । सबै खेलाडीहरुले एकले अर्कोलाई समर्थन गरिरहेको हुन्छन् र यसले गर्दा अझ राम्रो खेल्नको लागि प्रेरित गर्ने रहेछ ।
तपाईले पाएको दुई ओभरमा ३३ रन खर्चन पुग्दा कस्तो महसुस भयो ?
साचिकै भन्ने हो भने मलाई एकदम नराम्रो लागेको थियो । म नयाँ बल लिएर आउने योजनामा थिए । कप्तान (जेपी डुमिनी) र प्रशिक्षकसँग पनि त्यही अनुरुप छलफल भएको थियो । तर टिमको योजना परिवर्तन भएपछि म बीचको ओभरमा बलिङ्ग गर्न पुगे । त्यो समय ब्याटिङ्ग अनुकुल थियो । र मेरो आफ्नो गृहकार्यले पनि काम गरेन । सबै कुरा एकैपटक हुन पुग्यो ।
प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनु अघि अपेक्षा के थियो ?
हामीले सिँगापुरमा (बिश्व ट्वान्टी ट्वान्टी एसिया क्वालिफायर) राम्रो गरेको थिएनौ । त्यही कारणले मन खिन्न थियो र केही नसोचि त्यहाँ पुगे । मौका मिलेको खण्डमा आफ्नो बेस्ट दिन्छु भन्ने मात्र थियो ।
प्रतियोगिताको बिजेता बन्न पाउँदा कस्तो महसुस भयो ?
मलाई निकै रमाइलो लागेको थियो र हामी सबै खेलाडीहरु मिलेर खुशी पनि मनायौं । म टिममा राम्ररी घुलमिल भएको थिए । पाकिस्तानी र भारतीय खेलाडीहरु धेरै भएकोले पनि सहज भएको थियो । कप्तान डुमिनी र ड्वेन ब्राभो सुनौलो ह्रदय भएका खेलाडीहरु हुन् । उनिहरुले मलाई धेरै मद्दत गरेका थिए । ब्राभोले मलाई बलिङ्गमा सुझाव पनि दिनुभएको थियो ।
अब तपाइको फ्राञ्चाइज करिअर कसरी अगाडी बढ्छ जस्तो लाग्छ ?
अहिले नै केही भनि हाल्न मिल्दैन । समयले नै सबै कुरा बताउछ । मलाई आशा छ मैले यो सहित अन्य प्रतियोगिताहरुमा पनि सहभागिता जनाउने मौका पाउनेछु ।